मलेसिया गएका पर्वतका एक युवा १६ वर्षदेखि वेपत्ता, विष्णुमायाले भक्कानिँदै भनिन्, ‘मलेसिया गएको चार वर्षसम्म छोराले फोन गर्थ्यो त्यसपछि…. « Etajakhabar
मलेसिया गएका पर्वतका एक युवा १६ वर्षदेखि वेपत्ता, विष्णुमायाले भक्कानिँदै भनिन्, ‘मलेसिया गएको चार वर्षसम्म छोराले फोन गर्थ्यो त्यसपछि….
काठमाडौँ । रोजगारीका लागि मलेसिया गएका पर्वतका एक युवा १६ वर्षदेखि वेपत्ता भएका छन्। महाशिला गाउँपालिका–१ होश्राङ्दीको अर्गाउदीका उमाराज र विष्णुमाया विकका छोरा सर्वजित विक सम्पर्कविहीन भएका हुन्। विसं २०६२ मा रोजगारीका लागि मलेसिया गएका सर्वजित हालसम्म परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले खोजी गरिदिन अपिल गरेका छन्।
लामो समयसम्म पनि छोरो घर नफर्केपछि आमाबाबु चौबिसै घण्टा पिरोलिने गरेको बेपत्ता सर्वजितकी भाउजू सम्झना विकले बताइन्। काठमाडौँ मेभ मेनपावरबाट मलेसिया गएका सर्वजित मलेसियाको सेलेङगर भन्ने ठाउँमा (निलेइ कम्पनी( हेन गल्वस कम्पनीमा काम गरेको उनका आफन्त विष्णुराम विकले बताए।
चार वर्षसम्म सोही कम्पनीमा काम गरेको र त्यसपछि त्यहीँबाट सर्वजित सम्पर्कबिहीन भएका उनको भनाई छ। सर्वजितलाई विदेश पठाउने मेनपावर अहिले बन्द भएको छ । हालसम्म धेरै खोजी गर्दा पनि सर्वजितको अवस्था पत्ता नलागे पनि विक परिवार अझै पनि छोरो घर फर्किन्छ भन्ने आशामा छन्। छोरा गएको ठाउँ मलेसियालगायत सबैतिर खोजिदिन परिवारले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।